Russia Iyaqinisekisa Kyoto Protocol - Europe - News kwaye ngoku imicimbi ukusuka jikelele kweli lizwekazi - Zonke Russian abaqondisi-mthetho ingaba apha! Oyena isemthethweni portal.
Russia Iyaqinisekisa Kyoto Protocol - Europe - News kwaye ngoku imicimbi ukusuka jikelele kweli lizwekazi
'Siya kuba nethuba ukuba kuba cleaner elizayo
Urhulumente Duma thoba indlu yepalamente ikuvumile treaty ngevoti ka- ukuba, nababini abstentions, paving indlela kuba endorsement yi-ephezulu kwegumbi kwaye utyikityo Ngumongameli Vladimir Putin, abo sele signaled inkxaso yakhe kuba umthethoUkususela-United States barhoxa bemka i-treaty, i-Russia igcine isitshixo nokuba landmark idrafti isivumelwano ingaba emnqamlezweni i umda ukuba ingabi a isebenza ngamazwe explorer. Kuba yokusingqongileyo amaqela, ukwamkelwa ngabo Moscow marks ebalulekileyo ngena kwi-ezindleleni ekunciphiseni greenhouse iigesi. 'Siza sijonga emva kwi namhlanje njengokuba mzuzu kwimbali xa uluntu faced ukuya kwi-ayo uxanduva,' Greenpeace wathi kwi ingxelo ngolwesihlanu.
'Siza toast i-Duma kunye vodka tonight, kodwa ngomhla we-umvulo ngentsasa sidinga ukuba ukusonga zethu sleeves kwaye get phantsi real umsebenzi,' yathi yokusingqongileyo iqela ke, ukutshintsha kwemozulu-nkqubo advisor, Steve Sawyer.
Ngolwesihlanu ke ivoti resuscitated i-pact ukuba kude kube kutshanje waba mbasa bonke kodwa abafileyo emva kokuba Umongameli George W. Bush kwapapashwa kwi- ukuba i-United States, ihlabathi ke, oyena polluter, babefuna akukho enye inxalenye kuyo. I-Russia, apho ii-akhawunti ye- ipesenti yehlabathi u-carbon umoya emissions, ehambe emva kwaye phambili kwi endorsing i-treaty ngonaphakade oko kwaba kuqala drafted. Kodwa ekugqibeleni kwinyanga edlulileyo, Moscow amagosa karhulumente kunye Putin elicetyiswayo ukuvunywa. Russia ke, ukwamkelwa waba kuyimfuneko kuba Kyoto ukuya umkhosi ngenxa yokuba treaty stipulated ukuba asingabo kuphela uninzi amazwe approve ngayo, kodwa ukuba signatory izizwe eyiyo ipesenti yehlabathi ke emissions.
Abo iingxoxo ozayo ye-ivoti, isirussian amagosa hailed-mali amathuba pact iiprogram Moscow a wokuphucula iimeko zezimali ukususela kulo nyaka uphelileyo, xa urhulumente iinkokeli, kuquka Putin kokuba derided umthetho njengoko kakhulu costly.
'Lo umthetho unika i-Russia-mali namathuba,' wathi Valery Zubov, usekela kunye engundoqo pro-Kremlin United Us iqela kule ngxoxo phambi ngolwesihlanu ke ivoti. 'Us hopes ukwenza elifutshane inzuzo ngokusebenzisa treaty nge ekubeni nako kuyo ngaphandle eminye yayo izahlulo kuba greenhouse igesi emissions kwezinye industrialized signatories.
'Ithumela kakhulu forceful uphawu ukuba kuphumla yehlabathi
I-unye kukuba phantsi treaty, amazwe abo bangenalo exhausted zabo umda kuba emissions uza kukwazi kuyo ngaphandle credit essentially ilungelo pollute ukuba amazwe kokufuna ukwandisa zabo emissions izahlulo. Phantsi koxinzelelo ka-wentengiso kwaye ngeliso onenzuzo, izizwe ziya kuba ezisuka zande ukuvelisa abangaphantsi emissions ukuze bathengise ngakumbi. Incopho-Carbon, Norway esekelwe kokubonisana ifemi, sele uqikelelo ukuba Us ayikwazi earn $ bhiliyoni (bhiliyoni) kunye treaty ke uncedo yi. Russian Usekela-Prime Umphathiswa Zhukov wathi Us ingaba kusenokwenzeka ukuba indlela yalo Kyoto izahlulo yi- ukuba isizwe ke epheleleyo imveliso yasekhaya (GDP) lukhule nge ipesenti ngonyaka.
'Rusia waba phantsi unprecedented koxinzelelo,' wathi Natalya Narochinitskaya ye-nationalist Rodina (Motherland) Umntu.
'Ke, ukwamkelwa waziswa njengokuba stamp a civilized lizwe' kwaye hayi ngokusekelwe yokubhalwa data, waze wathi ozayo ye-ivoti. Kubalulekile widely babekholelwa ukuba Us bavumelana umqondiso umthetho kwi-kubuyela kuba European Union omnye treaty ke enkulu backers ukuxhasa Moscow ke ndithi ukuba ufake i-World Trade Umbutho. 'Ngu ndonwabe kakhulu imini kuba Yurophu kwaye kuba kum,' wathi Margot Wallström, isiswedish EU-Bume Commissioner emva Duma ivoti. Kubalulekile kananjalo kakhulu a victory kuba European Union, watsho, kubhekiswa kwi-tug-imfazwe phakathi i-brussels kwaye comment ingxwaba phezu pact. Nangona ekubeni isolated yakhe kuchaswa ukuba umthetho, i-United States sele wala endorse i-treaty.
'I-United States' indawo kwi-Kyoto Protocol alifumanisanga itshintshile, State Isebe isithethi Ngurichard Boucher wathi.
Emva isixhenxe idlulileyo limbo, i-Russia ke ipalamente ekugqibeleni ratified i-Kyoto Protocol, yokugqibela obstacle phambi ukutshintsha kwemozulu treaty uqalisa umkhosi kwihlabathi liphela.
Kuyinto victory kuba politics, uthi DW ke Jens Thurau. (Oct.) European Commission ngolwesine umhla we-yamkela ukuvunywa yi-Us ke ikhabhinethi ye-Kyoto Protocol ngolwesine, claiming kwaba 'victory' kuba European Union ngokudlulela pushed Moscow nzima ku lo mba.
(Sept.) - United States sele reiterated yayo ukwaliwa ye-Kyoto Protocol on global warming nangona ukuvuselelwa koxinzelelo isivuno emva Us iphelile iminyaka engama-hesitation by ukuba ratify i-treaty.
(Oct.) Researchers uqikelelo ukuba yehlabathi carbon umoya emissions uza kuvuka jikelele ipesenti ngowama, ukwenza oko lokuqala ukwanda iminyaka emithathu.
Ingcaphephe walumkisa ukuba 'ixesha uyabaleka ngaphandle' umda i-iziphumo yokutshintsha kwemozulu.
Ukutshintsha kwemozulu iimali ngu phakathi uninzi contentious imiba e COP.
Richer amazwe kuba wavuma ukunceda amahlwempu siphile global warming nokuphuhlisa greener olungenangxaki. Kodwa ingaba ukuba umsebenzi kwaye ngabo ukubhatala phezulu? I-UN ke ingxelo yemozulu inkomfa yi ekubeni igcine le kweyenkanga ngowama Bonn. Ingaba i-balwe kuba ukutshintsha kwemozulu umyalelo wokhuselo jonga kwi-Russia? Ingcaphephe nokukhalaza ka-massive yokusingqongileyo iingxaki kwaye activists karhulumente koxinzelelo.
Yintoni amaxwebhu ziyafuneka ukuze ufumane Russian lobumi. Ibhili simplifying i-acquisition ka-Russian ubumi